Nosintonina avy tao amin’ny honahona
"Jehovah … nitodika nitsinjo ahy … ka nandre ny fitarainako. Dia nampakatra ahy avy tao amin’ny lavaka fandringanana Izy, eny, tamin’ny fotaka mandrevo ; ary nampitoetra ny tongotro teo ambony vatolampy Izy." Salamo 40:1,2
Ny fotaky ny honahona dia sarin’ny fahotana, ary na ny mpino aza dia mety ho latsaka ao. Amin’ny voalohany dia toa tsy misy atahorana ny lalana mankamin’izany. Toy ny hoe mandeha eny amin’ny ahi-maitso, somary malefadefaka, mahafinaritra. Saingy arakaraka ny androsoana dia miha mahalana ny ahitra, ary miha dibo-drano ny tany. Tampotampoka eo dia milentika kely ny tongotra. Rehefa manohy, dia tafalentika lalindalina kokoa. Amin’ny farany dia tsy mety afaka intsony, na inona na inona atao. Tafalentika ianao, raikitra ao anaty fotaka ny tongotra roa. Ny ezaka rehetra atao mba hialana, dia vao mainka loza. Mangitakitaka ianao, ary tonga saina fa very raha tsy misy manampy. Dia manomboka miantso vonjy. Saingy hisy hahare ve?
Toy izany ve ny manjo anao ara-toe-panahy? Antsoy àry Andriamanitra. Izy irery no hany mahavonjy anao. Lazao tsotra aminy ny fahorianao, aza amboamboarina. Iekeo ireo fahadisoana nahatarika anao ho amin’izany, tsory fa tsy mahavonjy tena ianao, ka italahoy Andriamanitra mba hamonjy anao. Havelany ny helokao, noho ny fitiavany an’i Jesosy, Izay maty teo amin’ny hazofijaliana mba hamonjy ny mpanota; ary hanafaka anao amin’ny fatoran’ny ota Izy.
Hanana fifandraisana vaovao -na hita indray - amin’ny Tompo Jesosy ianao, fifandraisana mifototra amin’ny fitiavany, izay fantatrao noho ny finoana; dia ho tafajoro amina tany mafy ianao, hahita fanorenana mafy toy ny vatolampy, ho an’ny fiainanao.